An external file can be included anywhere inaPhp file by using the Php include function:-
The include command simply takes all the text that exists in the specified file and copies it into the file that uses the include function.
Whenafile is included:-
The included file inherits the functions, classes and variables above the line on which the include occurs.
From that point forward, all functions, classes and variables defined in the included file have the global scope.
Say we wanted to createacommon menu file that all our pages will use. A common practice for naming files that are to be included is to use the ".inc" extension. Since we want to createacommon menu let's save it as "menu.inc".
Web pages that usesacommon menu just need to include
'menu.inc' and all will have uniform menu.(savealot of coding
Web pages that usesacommon menu just need to include 'menu.inc' and all will have uniform menu.(savealot of coding works too)
Include function ကိုအသုံးပြူ ၍ ပြင်ပတွင် သီးခြား ရှိနေသော file တစ်ခုအား လက်ရှိ ရေးနေသော php file အတွင်းသို့ ဆွဲသွင်း နိုင်ပါသည်။
အထက် ဖေါ်ပြပါ အတိုင်း include("xxx.php") ဟု ရေးလိုက် ခြင်းဖြင့် xxx.php တွင်ရေးထား သမျှ code များအား လက်ရှိ ရေးနေသော php file အတွင်းသို့ ဆွဲသွင်း ကူးယူ (copy) လိုက်စေ ပါသည်။
File တစ်ခုအား include လုပ်လိုက် သောအခါ:-
Include လုပ်ခံရသည့် file (ဤဥပမာတွင် xxx.php) သည် ၎င်း၏ အထက်တွင် ရေးထား သမျှသော functions, classes နှင့် variables များကို အမွေ ဆက်ခံ အသုံးပြု နိုင်သည်။
Include လုပ်ခံရသည့် file (ဤဥပမာတွင် xxx.php) တွင် ပါလာ သမျှသော functions, classes နှင့် variables များကို လည်း include("xxx.php") စာကြောင်း နောက်ပိုင်း ရေးသမျှ code များမှ အမွေ ဆက်ခံ အသုံးပြု နိုင်သည်။
ဥပမာ သင်ရေး ထားသည့် web page အားလုံး ၏ ထိပ်တွင် ပုံစံတူ menu စာကြောင်း တခု ထည့်သွင်း ချင်သည် ဆိုပါစို့။ အောက်ဖေါ် ပြပါ အတိုင်း menu.inc ဟုအမည် ပေးထားသော file တခုကို ရေး၍ တနေရာတွင် save လုပ်ပါ။
ပြီးလျင်၊ သင်ရေး ထားသော web page များ၏ ထိပ်တွင် အောက်ဖေါ်ပြ ပါအတိုင်း include("menu.inc") ဟုရေးသွင်း လိုက်ပါ။
သင်၏ web page တိုင်း၏ ထိပ်တွင်၊ Home - About Us - Links - Contact Us ဆိုသည့် link ပါသော ပုံတူပန်းတူ စါကြောင်း တခု ပါလာ သည်ကို တွေ့ရ ပါလိမ့်မည်။